Wararkii ugu dambeeyay gaari lagu duqeeyay duleedka Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay gaari lagu duqeeyay duleedka Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyay gaari lagu duqeeyay duleedka Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Duqeyn Diyaaradeed oo xalay fiidkii ka dhacday degaanka Xaawo Cabdi oo ku yaalla duleedka Magaalada Muqdisho, taasi oo lala beegsaday gaari yar oo nooca raaxada ah.
Gaarigaan oo sida la sheegay Carib ahaa, waxaa saarnaa dhawr qof wuxuuna waday qaraxyo sida ay sheegayaan dadka degaanka, balse diyaarad ayaa mar kaliya duqeyn la eegatay, kadibna halkaasi ayuu ku qarxay oo uu ku sii bur buray.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeellaha hoose, waxa ay sheegeen gaarigaan inuu ka soo leexday degaanka Cadow Dibile, dhanka duurkana uu soo maray isaga oo laamiga ka soo fuulay deegaanka Xaawa Cabdi.
Xogta gaarigaan oo lala socday ayaa markii uu maraayay degaanka Xaawa Cabdi halkaasi lagu duqeeyay, guud ahaan dadkii saarnaa waa ay ku dhinteen.
Saraakiisha Maamulka Gobolka Shabeellaha hoose, waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan tallaabadaasi lagu duqeeyay gaarigaasi, maadaama ay tahay dhibaato laga hortagay.
Illaa hadda si faah faahsan looma oga tirada dadka saarnaa gaarigaasi iyo bartilmaameedkiisa meesha uu ahaa.